Tag: xisaabi | Martech Zone
Waa maxay ROI ee Macaamiil Daacad ah?
Jimco, Diisambar 15, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Waxaan bilownay howlgelin cusub oo aan la sameynay khubarada ku guuleysata macaamiisha shirkadda, Bolstra. Bolstra waa bixiyaha xalka software (SaaS) ee Ganacsi Ganacsi shirkadaha doonaya inay kordhiyaan dakhligooda soo noqnoqda iyagoo yareeya dhimirka iyo aqoonsiga fursadaha kacsan. Xalkooda, oo leh qaab-dhismeedyo ugu fiican, waxay ka caawisaa shirkaddaada inay waddo natiijooyinka la doonayo ee macaamiishaadu dalbanayaan. Dhawrkii sano ee la soo dhaafey, maaddaama safarkeenna suuq-geynta uu isbeddeley oo aan qiimeyneyno qaan-gaarnimada suuq-geynta ganacsiga
Waa maxay Nidaamka Dhiirrigeliyaha Net (NPS) Nidaamka?
Monday, July 21, 2014 Isniin, Maarso 13, 2017 Douglas Karr
Toddobaadkii la soo dhaafay, waxaan u safray Florida (waxaan sameeyaa tan rubuc kasta ama wixii la mid ah) iyo markii ugu horreysay ee aan dhageysto buug ku saabsan Audible oo ku saabsan jidka loo maro. Waxaan xushay Su'aasha Ugu Dambeysa ee 2.0: Sidee Shirkadaha Dhiirrigeliyeyaasha Net-ka ah ugu baraaraan Dunida Macaamil-Wada ka dib wadahadal ay la yeesheen qaar ka mid ah xirfadleyda suuqgeynta qadka. Nidaamka Dhibcaha Dhiirrigeliyaha Net wuxuu ku saleysan yahay su'aal fudud question su'aasha ugu dambeysa: Qiyaasta 0 ilaa 10, sidee